AMAKHAYELA: IBlumhouse ne-Amazon Unite: Ama-movie amasha we-4 okusakaza ngo-2021
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo AMAKHAYELA: IBlumhouse ne-Amazon Unite: Ama-movie amasha we-4 okusakaza ngo-2021
Nawa ama-trailer nama-synopses we- "Siyakwamukela eBlumhouse"
by UTimothy Rawles September 14, 2021
by UTimothy Rawles September 14, 2021 638 ukubukwa
Yisho ukuthi uzokwenzani ngomkhiqizo weBlumhouse, kepha ngokuqinisekile bakhiqiza okuqukethwe okuningi kubalandeli abesabekayo. Lo nyaka umaka okwesibili behlangana ne-Amazon ye Uyemukelwa eBlumhouse; uchungechunge lwamafilimu akhona ukusakazela kuwo ababhalisile be Prime.
Ngezansi uzothola uhlu lwalo nyaka olunamazwi okufingqa ngefilimu ngayinye nange-trailer yayo. Sazise uma ngabe kukhona noma konke lokhu kubamba intshisekelo yakho nokuthi yikuphi okulindele kakhulu ukukubona. Futhi, sazise ukuthi ucabangani ngeBlumhouse nokuqukethwe kwayo.
Mhlawumbe sijabule kakhulu ukubona uBarbara Hershey ebuyela kumuvi we-haunted house!
Kuqondiswe ngu: UGigi Saul Guerrero
Ibhalwe ngu: UShane McKenzie, uGigi Saul Guerrero, uPerry Blackshear
Kudlala: Adriana Barraza, L. Scott Caldwell, Richard Brake noJoshua Caleb Johnson
Isikhulu Sikhishwe ngu: UJason Blum, uLisa Bruce, uJeremy Gold, uMarci Wiseman, uRaynor Shimabukuro
Lapho umuntu oyingozi esongela izakhamuzi zomphakathi ohola kancane, isakhamuzi esikhulile esinamandla sizama ukumvimba Isihogo SeBingo, i-movie ekhohlakele yasekuqaleni esabekayo ene-twist ehlekisayo ehlekisayo. Ngemuva kokuthi isishoshovu esingumakhelwane esingamakhulu ayisithupha uLupita (Adriana Barraza) sithole ukuthi ihholo lalo lomdlalo webhingo elithathiwe selithathwe ngusomabhizinisi ongaqondakali ogama lakhe linguMnuz Big (Richard Brake), uhlanganisa abangane bakhe asebekhulile ukuze balwe nalo somabhizinisi oyindida. Kepha lapho omakhelwane bakhe asebemnkantshubomvu beqala ukubonakala befile ngaphansi kwezimo ezimangazayo, ngokuzumayo uLupita uthola ukuthi i-gentrification ingeyona yezinkinga zakhe. Okuthile okusabisayo kuzenzile ekhaya endaweni ethulile yase-Oak Springs, nangomsindo ngamunye omusha othi "Bingo!" esinye isisulu siwela ebukhoneni baso bobubi. Njengoba imiklomelo yemali inyuka futhi nesibalo somzimba sikhuphuka kancane, uLupita kumele abhekane nokwazi okusabisayo ukuthi lo mdlalo ungowinqoba ngempela.
Kuqondiswe ngu: UMaritte Lee Go
Ibhalwe ngu: USherman Payne
Kudlala: U-Asjha Cooper, uFabrizio Guido, uMason Beauchamp, u-Abbie Gayle noCraig Tate noKeith David
Isikhulu Sikhishwe ngu: UJason Blum, uJeremy Gold, uMarci Wiseman, uLisa Bruce, uMaggie Malina noGuy Stodel
Intombazane enobuhlakani obusha ishiya ubuntwana ngemuva lapho ilwa neqembu lama-vampire abulalayo Mnyama njengobusuku, i-hybrid yesenzo-esethusayo enonembeza oqinile kwezenhlalo nomqondo wokuluma wamahlaya. Ngemuva kweminyaka eyishumi nanhlanu iSiphepho uKatrina sihlasele iNew Orleans, usongo olusha lushiya uphawu lwalo kwiBig Easy ngesimo samanxeba okubhoboza emiphinjeni yabantu abasedolobheni abasengozini. Lapho umama wakhe ongumlutha wezidakamizwa eba yisisulu sakamuva se-undead, uShawna (Asjha Cooper) oneminyaka engu-15 uthembisa ukuthola amaphuzu. Ekanye nabangane abathathu abathenjiwe, uShawna uqeda uhlelo olunesibindi lokungena endlini ka-vampire e-Quarter yomlando waseFrance, aqothule umholi wabo, futhi abuyisele abafundi bakhe ababanjiwe babuyele esimweni sabo sobuntu. Kepha ukubulala izilo akuwona umsebenzi olula, futhi kungekudala uShawna kanye nabasebenzi bakhe bazithola sebebambene ngempi eyadonsa amakhulu eminyaka phakathi kwamaqembu e-vampire alwayo, ngalinye lilwela ukuthi iNew Orleans yikhaya labo laphakade
Kuqondiswe ngu: URyan Zarazoga
Ibhalwe ngu: UMarcella Ochoa noMario Miscione
Kudlala: UTenoch Huerta, Ariana Guerra, Evelyn Gonzalez, Kerry Cahill, no-Elpidia Carrillo
Isikhulu Sikhishwe ngu: UJason Blum, uJeremy Gold, uMarci Wiseman, uLisa Bruce, uSanjay Sharma noMatthew Myers
UBeto (Tenoch Huerta) noDiana (Ariana Guerra), umbhangqwana osemusha waseMexico naseMelika olindele ingane yabo yokuqala, bathuthela edolobheni elincane ngeminyaka yo-1970 eCalifornia lapho uBeto anikezwe khona umsebenzi wokuphatha ipulazi. Behlukaniswe nomphakathi futhi behlushwa amaphupho amabi adidayo, uDiana uhlola ipulazi lenkampani eyindunduma lapho behlala khona, ethola ikhubalo elibi kanye nebhokisi elinezinto zezakhamizi zangaphambilini. Ukutholwa kwakhe kuzomholela eqinisweni angalazi kakhulu nokwesabeka kakhulu kunalokho abengakucabanga.
Kubhalwe kwaqondiswa ngu: U-Axelle Carolyn
Kudlala: UBarbara Hershey, uBruce Davison, uNicholas Alexander, uJill Larsen, uFran Bennett noKatie Amanda Keane
Isikhulu Sikhishwe ngu: UJason Blum, uJeremy Gold, uMarci Wiseman, uLisa Bruce, uSandy King noRichard J Bosner
Ibutho elinobudlova lihlasela abahlali basekhaya labahlengikazi abalalayo e UManor, inganekwane yokwethuka nge-twist yesimanje. Lapho isifo sohlangothi esincane sinciphisa ikhono lakhe lokuzinakekela, uJudith Albright (uBarbara Hershey) uthuthela eGolden Sun Manor, indawo yokuhlala esiziwe enedumela elihle. Kepha naphezu kwemizamo emihle yabasebenzi, kanye nobungani obusafufusa noRoland (Bruce Davison) asebekhulile, izehlakalo ezingajwayelekile nemibono eyethusayo iqinisekisa uJudith ukuthi ubukhona obubi buhlupha ifa elikhulu. Njengoba izakhamizi ziqala ukufa ngendlela engaqondakali, izixwayiso ezixakile zikaJudith zithathwa njengezinganekwane. Ngisho nomzukulu wakhe ozinikele uJosh (uNicholas Alexander) ucabanga ukuthi ukwesaba kwakhe kungumphumela wokuwohloka komqondo, hhayi amadimoni. Njengoba kungekho muntu ozimisele ukumkholelwa, uJudith kumele abalekele imingcele yamakhosi, noma ahlaselwe ububi obuhlala ngaphakathi kwawo.
Iheda ngezilokotho zeBlumhouse.